किशोरीमै आमा बन्ने २७ प्रतिशत
जुम्ला-बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कर्णालीमा दर्जनौं संघसंस्थाले सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएका छन् भने गाउँपालिकाले त अभियानै पनि चलाएको छ । ‘विहेवारी कम्तीमा २० वर्ष पारि’ भन्ने नारा लगाउँदै बालविवाह रोक्ने अभियान चलाए पनि जुम्लामा बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।
औपचारिकतामा सीमित चेतनामूलक कार्यक्रमले नै बालविवाह ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ५२ प्रतिशत बालविवाह रहेको बताए । पढेलेखेका भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह बढी छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार जुम्लाकोे कुल जनसंख्या एक लाख १८ हजार छ । जसमध्ये ५५ हजार ४ सय ४२ जना बालबालिका छन् । जम्मा बालबालिकाको ५२ प्रतिशत बालबालिकाले बालविवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जसमा जुम्लामा ६७ प्रतिशत बालविवाह भएको छ भने कर्णाली अस्पताल जुम्लाले निकालेको एक रिर्पोटअनुसार बालविवाहकै कारण जुम्लामा किशोरी उमेरमै आमा बन्नेको संख्या २७ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । १२ वर्षदेखि माथि २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने किशोरी जुम्लामा मात्रै २७ प्रतिशत रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल जुम्लाको तथ्यांकमा छ । जुम्लामा २७ प्रतिशत किशोरी आमा हुने वा पहिलो बच्चा जन्माउन गर्भवती हुने गरेका छन् ।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये बालविवाह हुने जिल्लाका रूपमा जुम्लामा किशोरावस्थामा आमा बन्ने पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेका हुन् । किशोरी उमेरमै आमा हँुदा आमा र बच्चा दुवैलाई विभिन्न खालका स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ । आव ०७४÷७५ मा अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आएका ६ सय ७४ मध्ये १ सय ७९ जना किशोरी थिए । आव ०७५÷७६ मा सुत्केरीका लागि आएका ६ सय ७८ महिलामध्ये १ सय ३० जना किशोरी २० वर्षमुनिका रहेको प्रतिष्ठानको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सुत्केरी गराउन आउनेमा २०–३४ वर्षका ५ सय १८ र ३५ वर्षदेखि माथिका २७ जना रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
गर्भावस्थामा दुई आमाको मृत्यु
गत वर्ष गर्भावस्थामा दुई आमाको मृत्यु भएको थियो । सानै उमेरमा विवाह गरेकै कारण गर्भाधारण हुन नसक्दा गत वर्ष जुम्लाा दुईजनाको मृत्यु भएको प्रतिष्ठानको रेकर्ड छ । मृत्यु हुनेमा चन्दननाथ नगरपालिका–७ की विष्णुमाया महतको गतसाल २६ असोजमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
गर्भपतन गर्न स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहबिना औषधि प्रयोग गर्दा अत्यधिक मात्रामा रक्तस्राव हुँदा उनको मृत्यु भएको प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गर्भावस्थामा उनलाई निमोनिया र मुटुरोग रहेकाले पनि गर्भपतनको औषधि प्रयोग गर्दा यस्तो दुर्घटना हुन पुगेको प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा छ ।
त्यसैगरी, तातोपानी गाउँपालिका–७ ताम्ती गाउँकी १८ वर्षीया संगीता रावतको गत ३० फागुनमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । गर्भवती भएको २८ हप्तामा उनको मृत्यु भएको अस्पतालका निर्देशक धर्मराज गोसाईंले बताए । कम उमेरमा गर्भवती भएको, उचाइ सानो भएको, गर्भावस्थामा निमोनिया भएको, मुटुसम्बन्धी समस्या देखिएको र नसा बन्द भई रक्तसञ्चार नभएकाले उनको मृत्यु भएको चिकित्सकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानसिक समस्यामा किशोरी
बढ्दो बालविवाहका कारण आमा बन्ने महिलाको संख्यामा वृद्धि हुँदा किशोरी आमामा स्वास्थ्यसँगै मानसिक समस्यासमेत बढको प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईंले बताए । “कम उमेरमा विवाह गर्ने र चाँडै आमा बन्ने हुँदा किशोरीको ज्यान जोखिममा छ,” उनले भने, “कम उमेरमा आमा बन्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्या देखिएको छ भने अर्कातिर सोही कारणले उनीहरू घरेलु हिंसामा समेत पर्ने गरेका छन् ।”
किशोरी आमाको शारीरिक अपरिपक्वता हुनुका साथै मानसिक तथा सामाजिक रूपले पनि अवस्था कमजोर हुने गरेको डा. पुजन रोकायाले बताए ।
जिल्लाको सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने गरेको पातारासी गाउँपालिकाले बालविवाहविरूद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । बालविवाह रोक्न तथा छोराछोरीबीचको असमानता हटाउन गाउँपालिकाले अस्पतालमा छोरी जन्मे प्रोत्साहन भत्तास्वरूप तीन हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले बताए ।
अस्पतालमै बस्ने सुविधा
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको समन्वयमा प्रसूति हुने समयभन्दा हप्ता दिनअगावै डिस्चार्ज नहुन्जेलसम्म बस्न तथा खानको निःशुल्क व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लक्ष्मण चौलागाईंका अनुसार विशेषगरी मातृ र बाल मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न यस प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको हो । दुई÷तीन दिनभित्रै बस्ने कोठाको व्यवस्थापन गरी खान पकाउने र बस्ने व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
कुन जिल्लामा बालविवाह कति ?
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका अनुसार कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम डोल्पामा ४९ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिममा ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ भने तेस्रोमा जुम्ला ६७ प्रतिशत बालविवाह भएको छ । जसअनुसार कर्णालीका दशवटै जिल्लामा बालविवाह भइरहेको छ ।
हुम्लामा ५२, मुगु ५७, कालिकोट ५९, जाजरकोट ६५, सुर्खेत ६८, सल्यान ६९ र दैलेखमा ७० प्रतिशत बालविवाह भएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये मानव विकास सूचकांकका आधारमा चौथो स्थानमा रहेको जुम्लामा बालविवाहकै कारण १९ वर्षमुनिका ३३ प्रतिशत बालिका गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ ।